चिनियाँ फोन तुरुन्त फाल्न र नयाँ नकिन्न रक्षा मन्त्रालयको चेतावनी, के होला अब ? — Imandarmedia.com
चिनियाँ फोन तुरुन्त फाल्न र नयाँ नकिन्न रक्षा मन्त्रालयको चेतावनी, के होला अब ?
एजेन्सी। लिथुआनियाको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना सबै नागरिकलाई चिनियाँ फोन तुरुन्तै फाल्न र अब नयाँ नकिन्न चेतावनी दिएको छ । त्यहाँको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले यसअघि चीनले निर्माण गरेका फाइभजी मोबाइल फोनको परीक्षण गरेको थियो ।
केन्द्रले एउटा शाओमी फोनमा स्थायी ‘सेन्सरसीप टुल्स’ र अर्को हुवावेको मोडलमा सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर समस्या देखा परेको जनाएको छ । ‘हाम्रो सुझाव भनेको चिनियाँ फोन किन्दै नकिन्नु हो । र, कसैले पहिले नै किनिसकेको छ भने छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई फालिदिने या चलाउन बन्द गर्ने हो’, डेपुटी रक्षामन्त्री मार्गरिस अबुकेभिसिअसले भने ।
यता, हुवावेले प्रयोगकर्ताका कुनै डाटा कतै नपठाइने दाबी गरेको छ भने शाओमीले पनि सञ्चारमा सेन्सर नलगाइने स्पष्टीकरण दिइरहेको छ ।शाओमीको ‘एमआई टेन-टी फाइजजी’ फोनमा यस्तो सफ्टवेयर फेलापरेको छ, जसले ‘फ्री तिब्बत’, ‘लङ लिभ ताइवान इन्डिपेन्डेन्स’, ‘डेमोक्रेसी मुभमेन्ट’ जस्ता चीनमा विवादास्पद मानिने शब्दहरू पत्ता लगाई सेन्सर अर्थात् प्रतिबन्ध गराउन सक्ने त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयको रिपोर्टले जनाएको छ ।
‘हुवावेको एप्लिकेसन स्टोर, एप ग्यालरीले प्रयोगकर्तालाई तेस्रो पार्टीको ई-स्टोरमा पुर्‍याउने गर्छ । त्यहाँका केही एपहरू एन्टि-भाइरस प्रोग्रामको पहुँचमा छन् या कम्प्युटर भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन सक्छन्’, लिथुआनियाको रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जनाएको छ । हुवावेले यसको स्पष्टीकरणमा आफूहरूले सबै देशको नीति–नियमानुरूप नै काम गर्ने गरेको र साइबर-सुरक्षा तथा गोपनीयताको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।
ताइवानले लिथुआनियासँगको मिसनलाई ‘ताइवानिज प्रतिनिधि कार्यालय’को नामले बोलाउने घोषणा गरेदेखि दुई देशबीच विवाद सुरु भएको थियो । युरोप, अमेरिकालगायत अरू देशहरूमा रहेका ताइवानी दूतावासले विवादमा नपर्नकै लागि यसको राजधानी, ताइपेईको नाम मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्, जसले टापुको पूरा नाम जनाउँदैन । चीनले ताइवानलाई आफ्नै भूमि दाबी गर्दै आएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा